Awona maxabiso e-Lockdown. Ukuhlala ixesha elide ngokugqibeleleyo. Ucoceko. - I-Airbnb
Awona maxabiso e-Lockdown. Ukuhlala ixesha elide ngokugqibeleleyo. Ucoceko.
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguWilliam
Amaxabiso athotyiweyo ngokukodwa emva kwe-Lockdown. Izaphulelo ezilungileyo zokuhlala ixesha elide. Ucocekile.
Imizuzu eyi-15 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseLanseria. Imizuzu emi-5 ukuya eFourways Mall / Montecasino. IZIMITA EZILISHUMI ukuya eDainfern Square.
Iireyithi ezigqwesileyo zexesha elide. Ifanelekile kubaphathi beshishini abasedolophini kwisiseko sexesha eliphakathi okanye kwabo baphakathi kwamakhaya. ILaptop indawo yokusebenza enobubele kunye ne-WiFi ye-100 mb/sec SIMAHLA kubuchwephesha, kodwa isicwangciso esitofotofo kufutshane nendawo yeshishini leFourways.
Eli gumbi linegumbi lokulala eli-2, ekwabelwana ngalo libonelela ngendawo yokuhlala entle kwindawo enoxolo. Ime kwindawo ekhuselekileyo enendawo yokupaka yabucala.
Olu luhlu lolwegumbi elihonjiswe ngokumnandi, labucala elilala umntu omnye okanye ababini kwibhedi etofotofo kakhulu.
Kukho igumbi lokuhlambela labucala langoku. Ucango lwegumbi lokutyibilika luvuleleka kwibalcony ejonge kumbono omhle kunye nesiXeko saseSteyn.
Iindwendwe zinokufikelela kwindawo yonke. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo linendawo yekhabhathi eyaneleyo, isitovu segesi, i-oveni, ifriji, ifriji, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba, imicrowave, iketile, itoaster kunye nazo zonke izinto zokuthambisa kunye nezitya ozifunayo.
Indlu yeklabhu ene-braai/i-BBQ eyakhelwe-ngaphakathi kunye nephuli enomtsalane ikunika ithuba lokukhaba izihlangu zakho kwaye uphumle emva kosuku olude.
Kungenjalo bhaqa phantsi esofeni kwigumbi lokuphumla kwaye ubukele umabonakude
Le ndawo ikwi-Dainfern Square yobutofotofo ebonelela ngomxube wokuzonwabisa, ukomelela, ishishini kunye nokuthenga ngokulula, kukho iivenkile ezigqibeleleyo ezingama-70 ezifumanekayo kulonwabo lwakho lokuthenga.
I-Dainfern Square ibonisa uWoolworths, uPick n Pay, uCofa, uRegus kwakunye nejimu ebalaseleyo eVirgin Active. Ukongeza kwiiNdawo zokutyela ezi-5, iivenkile zekofu ezi-4 kunye nezibonelelo ezi-3 zokutya okunempilo, iZiko linandipha ubukho beSteers, i-Debonairs Pizza, i-Pizza Hut, i-Anat, kunye ne-Fish Aways yokutya okukhawulezayo.